सुनकोसीस्थित खैरेनीघाट पुल, कालोसूचीमा राख्ने चेतावनीपछि ठेकेदारले काम अघि बढायो - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
सुनकोसीस्थित खैरेनीघाट पुल, कालोसूचीमा राख्ने चेतावनीपछि ठेकेदारले काम अघि बढायो
कार्तिक २६, २०७४ 4391 ऊर्जा खबर/सिन्धुली
सडक विभागले कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएपछि ठेकेदारले सुनकोसी नदीमा निर्माण भइरहेको पुलको कामलाई तीव्रता दिएको छ । ९ वर्षदेखि रोकिएको पुलको कामले अहिले गति लिएको हो ।
सिन्धुली–रामेछाप जोड्न सुनकोसीको खैरेनीघाटमा ८३ मिटर लामो पुल निर्माण भइरहेको छ । कन्काई लामा खम्पाचे जेभीले कामको जिम्मा पाएको छ । काममा ढिलाइ गरेको स्थानीयको गुनासोपछि पुल महाशाखाले ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी सहितको सूचना जारी गरेको थियो ।
तीन वर्षमा पुल सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि ठेकेदारले ९ वर्षमा पनि काम पूरा गरेको छैन । विभागको दबाबपछि ठेकेदार काम गर्न बाध्य भएको स्थानीयले बताए ।
सिन्धुलीतर्फ तीन वटा पिलर निर्माण पूरा भएर ढलान हुने चरणमा छ । चालू वर्षभित्रै सवारी आवागमन गर्ने गरी काम भइरहेको जनाइएको छ । चारमध्ये तीन वटा पिलर निर्माण भएको छ । रामेछापतर्फको पिलर निर्माण गर्न बाँकी छ ।
ठेकेदारले रामेछापतर्फको पिलरको काम पनि तत्तकाल सुरु गर्ने जनाएको छ । करिब ८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको पुल चालू वर्ष नै पूरा गर्ने कम्पनीका सञ्चालक आङदावा शेर्पाले बताए ।
‘चालू वर्षभित्रै यातायात सुचारु गर्ने योजनाका साथ काम भइरहेको छ,’ उनले भने । पुल निर्माणपछि रामेछापका लागि ठूलो टेवा पुग्नेछ । काठमाडौंबाट करिब ९० किलोमिटर दूरीको सिन्धुली, काभ्रे र रामेछापको संगमस्थल कुशेश्वर दुम्जास्थित खैरनीघाटमा समयमा पुल नबन्दा रामेछापबासीले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।